मनोकथा : रूपक अधिकारी
अक्सर पुस्तकमा कहीँ कतै आफूलाई भेट्नु नौलो कुरा हैन । पुस्तकमा काल्पनिकताको पुलमा चढेर जीवनको भोगाइ लेख्ने गरिन्छ । चाहे रामायण होस्, चाहे महाभारत वा कुनै साधारण साहित्यिक कथा सबै यहाँ मानव सभ्यताको परिकल्पनामा नै लेखिन्छन् त्यसो हुँदा कहीँ कसैको कलममा आफ्नो कथा छापिनु स्वाभाविक हो । किनकि, साहित्यकारलाई हामी श्रष्टा मात्र भन्दैनौं द्रष्टा पनि मान्छौं । हामी त कुनै कुनै गीत पनि आफ्नै लागि लेखिएको भन्छौं र बारम्बार गुनगुनाइरहन्छौं । वास्तवमा हामी जब आफूलाई अलिकति कसैको रचनामा पाउँछौं, त्यसले हाम्रो दिल कब्जा गरिहाल्छ ।
त्यसपछि, हामी भन्छौं ‘यहाँ मलाई लेखिएको रहेछ ।’ हो त्यस्तैगरी, मोचनमा मैले आफूलाई पढ्ने सौभाग्य पाएँ । यहाँ केही प्रतिशत समानता पाएर हैन कि थोरै छोडेर अझ करिब ९८.५ आफूलाई पाएँ भन्दा गलत हुनेछैन ।
‘के त्यसोभए थेसिस लेख्न अमेरिका भासिएको जीवन र जिन्दगी लेख्न इन्डिया भासिएको रूपक एउटै हो त ?’
जाडोयामको पानीमा म न्यानो खोज्दै कल्पनामा हराइरहेका बेला काँपिरहेको मेरो शरीरको ख्याल गर्दै न्यानो उपस्थिति लिएर आई उही पुरानो रहस्य । मेरी प्यारी बहिनी रहस्यता ।
‘तैँले मोचन पढिस् ?’ मैले उसलाई प्रश्न गरेँ । उसले आजसम्म कखरा पनि पढेकी छैन अनि साहित्य कसरी पढोस् ।
‘मैले तँलाई पढेकी छु अनि फेरि तँ यो किन बिर्सिन्छेस् म तँभित्र ज्युँदो छु । तैँले पढ्नु भनेकै मैले पढ्नु हा ।’
उसको उत्तरमाथि कहिल्यै शंका रहँदैन । पोखरा भ्रमणपछि ऊ आज फेरि आई । केही न केही त पक्कै छ । तर, के ? ‘कि पानी परेको भएर हो । पानी परेर मेरो याद आएको हो त उसलाई ?’ आँफैसँग प्रश्न गर्छु ।
‘तँलाई के लाग्छ मलाई तेरो याद आउन पानी परिरहनुपर्छ र ?’
‘बादलले खेलेको मौसमसँग मेरो कुनै गुनासो छैन मलाई तेरो याद आउन यहाँ पानी परिरहनुपर्दैन, हेर दुनियाँलाई सुनाउन यति प्रिय कुरा गर्छस् अनि मेरो उपस्थितिको शंका गर्छस् ।’
प्रश्नको झटारोले हिर्काएर ऊ सदाझैं अलप भई । जसरी, घाम नहराएर पनि एउटा निश्चित समयमा देखिन बन्द हुन्छ, त्यसैगरी, ‘रहस्यता’ मभित्र बसेर पनि अलप हुन्छे । अर्को प्रश्नसँगै अर्काे बिहान बनेर फेरि उदय हुन्छे । उसको प्रश्न जायज छ, किनकि कसैलाई पनि याद गर्न मौसम बदलिनु पर्दैन ।
‘त्यस्तो हैन नानी, यो दुनियाँमा यस्तै चलन छ र म पनि त यही दुनियाँको हिस्सा हुँ । शंका गर्नुभन्दा पनि नियममा बसेको हुँ भन्दा बेस होला ।’
‘ल भयो छोड यी कुरा । तेरी अनामिकाको के छ खबर ?’
उसको प्रश्नले आफैंसँग हाँस उठ्यो । जिन्दगी किताबको र चलचित्रको जस्तो भएर पनि नहुँदो रहेछ । सबैको भाग्यमा अनामिका नहुँदा रहेछन् । किनकि, खत परेको विगतले सत नमिल्दो रहेछ । हुन त मैले अनामिकाको रूपमा कसैको साथ पाइसकेको छु, तर क्षणभरको साथको के काम ? पुरानो घाउ सुनेर आफैंदेखि टाढा भएँ भन्नेलाई अनामिकासँग दाँज्न मिल्दैन ।
किनकि, अनामिकाले त जीवनलाई बाँकी उमेर साथ दिएकी छ, तर मेरी अञ्जुमन अहँ ! उसको बारे भन्नु यो छ कि घरकाले मान्नुहुन्न । ‘घरकाले प्रेम नमान्ने कि मसँग नमान्ने’ भनेर सोध्न मन थियो तर सोधिनँ ।
किनकि, थोरै पहिलेसम्म घरकाले मान्ने नमान्ने कुरा थिएन । ‘उसले खासमा सेकेन्डहेन्ड हस्बेन्ड चाहिँदैन भनेकी हो दादे’
मेरो कुरामा रहस्यताले आफ्नो विचार पोखी । यति कुरा त म पनि स्पष्ट बुझ्छु । तर, यो बुद्धू मन बुझ्न चाहिरहेको छैन । रत्तिभर पनि मान्न चाहँदैन बरु यो मन त उसलाई ‘एनोदर नेम अफ जोय एन्ड लभ इन्फिनेटली’ भन्छ ।
हामी जब शक्ति देखाउने कुरा गर्र्छौं तब पुरुषार्थ अघि सर्छ । पितृसत्तात्मक सोच हो भन्छौं । ‘पुरुषलाई पहलमान सोच्नु यदि त्यस्तो सोच हो भने हरेक अवस्थामा महिला पीडित भन्नुचाहिँ के हो त ? हरेक समय पुरुष नै गलत हुँदैनन् । के महिलाका कारण घरबार बिग्रिएको उदाहरण छैनन् ?’ के जीवन बिगार्ने आश्मा हैन र ?
‘पाखे’ भन्नेदेखि शुरु भएको कथा ‘तँ मर्’ भन्नेसम्ममा पुग्नुमा दोषी आश्मा होकि हैन भन्ने कुरा पढ्नेले बुझेका होलान् । ‘तँ साले कमाउन नसक्ने हुतिहारा जा डिभोर्स दे मलाई’ भन्नेदेखि मैले आत्महत्याको प्रयास गर्नुसम्म पुग्नु ठ्याक्कै उही प्रवृत्तिको हो । अब यसमा कायम रहेको सम्बन्ध सकाएर नयाँ तरिकाले शुरुवात गर्नु गलत हो भने भयो मलाई अनामिका चाहिँदैन । जिन्दगीभर एक्लै ठीक छु । तर, अनामिका बनेर आएकी अञ्जुमनमा मैले भविष्य देख्नुहुँदैन भन्ने आश्मा जस्ता नारीहरू किन जन्मिन्छन् त ?
कथाभित्रको पात्र जीवन हो, तर कथा बाहिरको यो पात्र रूपक अर्थात् म हो । दुवै यहाँ श्रीमती पीडित छन् । तर, यसरी खुलेआम म पीडित भएँ भन्दा दुनियाँ हाँस्न सक्छ ।’ आखिर छोरा मान्छे भएर पीडा सहने ।
आश्मा कतिको पीडक हो त्यो त म भन्न सक्दिनँ । किनकि, मोचन एउटा पुस्तक जो हो तर अनुपमाले तँलाई धेरै चोट दिएकी छे । दशंैको दिनमा तेरो आँखामा आँसु पनि त्यही भएर नै हो ।
कथाभित्रको पात्र जीवन हो, तर कथा बाहिरको यो पात्र रूपक अर्थात् म हो । दुवै यहाँ श्रीमती पीडित छन् । तर, यसरी खुलेआम म पीडित भएँ भन्दा दुनियाँ हाँस्न सक्छ ।’ आखिर छोरा मान्छे भएर पीडा सहने । नामर्द, छिः छिः छिः भन्न थाल्छ तर त्यही छोरामान्छेले हात उठायो भने फेरि अर्काेथरी कुरा उठ्छ । पुरुष हुन सजिलो छैन ।
फ्रेम गरेको फोटो च्यात्ने आस्था र लेमिनेसन गरेको बिहे दर्ता प्रमाणपत्र च्यात्ने अनुपमा सही छैनन् । कमसेकम हामीले पशुत्व व्यवहार गरेनौं । साँच्चै हाम्रो ठाउँमा छोरा मान्छे हुन बहुत गाह्रो छ । असाध्यै धेरै गाह्रो काम हो ।
‘नारी हुन झन् धेरै गाह्रो छ नि दादे ।’ नारीले महिनावारी चक्र पूरा गर्नुपर्छ । गर्भ बोक्नुपर्छ, यदि, मानसिक पीडा नाप्न मिल्थ्यो भने थाहा हुनेथियो पुरुषले कति अदृश्य चोट खाएको छ भनेर ।
‘सबैले खान्छन् त ?’
‘जसरी सबै नारीले महिनावारी चक्र पूरा गर्छन्, त्यसैगरी हरेक पुरुषले अदृश्य घाउ सहन्छ । फरक यति हो कसैको मनमा घाउ मात्र लाग्छ अनि कसैको घाउमाथि नुनचुक छर्कने काम हुन्छ ।
‘जब दर्द नही था सिनेमे तब खाक मजा था जिनेमे’ भन्दै फोन बज्यो । फोनको डिस्प्ले बल्नासाथ रहस्यता फेरि ‘रहस्य’ बनी । मोचनले पढाएको जिन्दगी सुनाउन नपाउँदै उ फेरि अलप भइसकेकी छे । तर, उसको एउटा राम्रो पक्ष यो होकी मलाई येथेष्ट सोच्ने मौका दिन्छे । एउटा प्रष्ट उत्तर नआएसम्म उसको उपस्थितिका पराकम्पहरू गइरहन्छ । ऊ लामो समय हराउने भनेको फेरि अर्को प्रश्न नजन्मिएसम्म हो ।
आज झरीमा चिच्याउँदै भन्न मन छ म पीडाको सगरमा छु । मेरा आँसु रुने त्यो बादलभन्दा प्रिय अरू केही छैन ।
‘के म पनि प्रिय छैन र ?’
‘प्रिय त मेरी अञ्जुमन पनि छे । तँ भन्नु त आफ्नै जिन्दगी हो नि, प्रिय छैन होला त ? तर, जिन्दगीलाई याद हैन रियल ज्युने गरिन्छ ।’
सायद, उसले सन्तुष्टको पकवान चाखिसकेकी छे । त्यसैले, मेरो ओठमा माधुर्यताको लेपन लगाएर ऊ बिदा भई । म यही लेपन अञ्जुमनको ओठमा पोत्न चाहन्छु । म चाहन्छु मेरी अनामिकाले मलाई अनन्तसम्म साथ देओस् । उसको चित्र कोर्ने आदतले जिन्दगीको मीठो चित्र कुँद्न सफल होस् ।
[…] अनामिकाको खोजी […]